������������������������ ��������� - नारी
सौन्दर्यकर्मी शान्ति सम्मानित
नारी संवाददाता , माघ ९, २०७८
सौन्दर्यकर्मी शान्ति महर्जन ‘सौन्दर्यकर्मी सम्मान २०७८’ मार्फत सम्मानित भएकी छन् । रोज सीप विकास तालिम केन्द्रको २१ औं वार्षिकोत्सवमा उनी एक कार्यक्रमका बीच सम्मानित भएकी हुन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
नारी संवाददाता , माघ ७, २०७८
भास्करका कुरा सुनेर शारदा छक्क परिन् । भास्करको आँसु पुछ्दै भावुक स्वरमा भनिन्, ‘के भो हजुर ? -- पुरै पढ्नुहोस् --
उमेर नपुग्दै बालिकामा किशोरावस्थाका लक्षण
उमेर नपुग्दै बालिकाहरू शारीरिक रूपमा परिपक्व हुँदै गएका छन् । मासिक स्राव सुरु हुनु, स्तनको आकार बढ्नु, यौनाङ्ग एवं काखीमा रौं पलाउनु, स्वर धोत्रो हुनु, उचाइ बढ्नु आदि परिवर्तन किशोरावस्थामा पुगिसकेपछि हुने हो । किशोरावस्था १३ वर्षदेखि सुरु भएको मानिन्छ । यद्यपि किशोरावस्थामा नपुग्दै बालिकामा यस्ता परिवर्तन देखापर्न थालेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? यसमा एउटा मात्र जवाफ छैन । विविध कारणले उमेर नपुग्दै बालिकाहरूमा शारीरिक परिवर्तन देखिँदैछ । -- पुरै पढ्नुहोस् --